OTU ESI EJI UTORRENT - UTORRENT - 2019
Ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ọtụtụ akaụntụ na kọmputa - dịka ọmụmaatụ, maka njikwa ebumnuche ndị nne na nna. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ akụkọ, enwere ike ịgbagwoju anya, ebe ọ bụ na edoghị ya anya ozugbo nke n'ime ha ka usoro ahụ dị. Ị nwere ike idozi esemokwu a site na ịlele aha onye ọrụ ugbu a, ma taa, anyị chọrọ ịme ka ị mara ụzọ ịme ọrụ a.
Otu esi achọta aha njirimara
Na nsụgharị ochie nke Windows, e gosipụtara aha aha ahụ mgbe a kpọrọ oku ahụ. "Malite", ma ndị mmepe jụrụ nke a na mbipute nke "windo" site na 8. Na mgbakọ nke "ọtụtụ" na 1803, ohere a laghachiri - a pụrụ ịhụ aha site na nchịkọta ndị ọzọ "Malite", dị site na ịpị bọtịnụ na ogwe atọ. Otú ọ dị, na 1803 na nke dị elu, e wepụrụ ya, na ọkwa ọhụrụ nke Windows 10, nhọrọ ndị ọzọ maka ịlele aha onye ọrụ ahụ dị, anyị ga-enye ndị dị mfe.
Usoro 1: "Iwu Iwu"
E nwere ike iji ọtụtụ usoro manipulations mee ihe "Iwu iwu"gụnyere nke anyị chọrọ taa.
Meghee "Chọọ" ma malite dee okwu ahịrị akara iwu. Nchịkọta egosiputa ngwa achọrọ - pịa ya.
Mgbe ntinye ntinye iwu ahụ mepee, họrọ nkwupụta na-esonụ ma pịa Tinye:
Ndị otu ahụ ga-egosipụta ndepụta nke akụkọ niile e kere na usoro ihe a.
O di nwute, enweghi nhọrọ nke onye ozo nke di ugbu a, ya mere, usoro a bu nani maka kọmputa ndi nwere akuko 1-2.
Ụzọ nke abụọ ị ga-esi amata aha njirimara - ngwá ọrụ "Ogwe njikwa".
Meghee "Chọọ"ụdị na akara nchịkwa nchịkwa ma pịa ihe ọ rụpụtara.
Igbanwe ngosi ngosi akara ngosi "Nnukwu" ma jiri ihe ahụ "Akaụntụ Ndị Akaụntụ".
Pịa na njikọ "Jikwaa akaụntụ ọzọ".
A windo ga-emeghe nke ị nwere ike ịlele ihe ndekọ nile dị na kọmputa a - ị nwere ike ịhụ aha n'aka nri ọ bụla nke avatars.
Usoro a bara uru karia iji "Iwu iwu", n'ihi na enwere ike iji ya na akaụntụ ọ bụla, ihe ndị a kapịrị ọnụ na-egosiputa ozi ọma.
Anyị lere anya na ụzọ ị nwere ike ịchọpụta aha njirimara kọmputa na Windows 10.